कानेगुजी के हो ? यसलाई सफा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य कानेगुजी के हो ? यसलाई सफा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के ?
२०७८, ११ असार शुक्रबार ०९:५३
कानेगुजी – नाम सुन्ने बित्तिकै पनि धेरैलाई घिन लाग्न सक्छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने कानेगुजी हाम्रो शरीरबाट निस्कने एउटा यस्तो प्राकृतिक तत्व हो जसको एउटा महत्वपूर्ण काम हुन्छ । त्यसैले यसलाई सफा राख्ने कुरालाई तपाईंलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन ।
बेलायतकी नाक कान घाँटीका सर्जन गेब्रियल वेस्टनले कान सफा राख्ने सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा खराब तरिकाबारे अनुसन्धान गरेकी छिन् ।कुनै नतिजामा पुग्नु अघि डाक्टर गेब्रियल वेस्टनले कानेगुजीबारे जानकारी दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानेगुजी एउटा यस्तो पदार्थ हो जुन कानभित्र रहेको ग्रन्थीमा पैदा हुन्छ र यसका थुप्रै काम हुन्छन् ।’
यो हाम्रो कानलाई सफा र स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ । यसले कानको नलीको माथिल्लो भागमा जमेको पत्रलाई सुक्न र त्यसमा चिरा पर्नबाट रोक्छ ।
यसले कानलाई धुलोको कण र पानीबाट जोगाउँछ जसले संक्रमणलाई रोक्नमा मद्दत गर्छ । धेरैजसो हाम्रो कानको नली आफैं सफा भइरहन्छ ।
कानेगुजी कहिले बन्छ समस्या?
बजारमा यस्ता थुप्रै चिज बिक्छन् जसले कानको सबै फोहोर बाहिर निकाल्ने दाबी गर्छन् । तर प्रश्न यो उठ्छ कि यी उत्पादनबाट के साँच्चै नै मद्दत मिल्छ?
कानेगुजीबाट छुटकारा पाउन चाहनेहरुका लागि इयर क्यान्डलजस्ता उत्पादन पनि बजारमा उपलब्ध छ । यसमा एउटा लामो, पातलो र बलिरहेको मैन बत्तीलाई एउटा सोलीको आकार भएको चिजमा राखिन्छ ।
सोलीमा एकातिर प्वाल हुन्छ र यसको दिशा कानको भित्रि भागतिर हुन्छ । यसको प्रयोगले कानको फोहोर र अन्य फोहोर सफा हुने दाबी गरिन्छ ।
तर अनुसन्धानले बताउँछ कि इयर क्यान्डल्सले कानको फोहोर सफा गर्न असरदार छैन र यसले खतरा हुनसक्छ । यसले कान र अनुहार जल्न सक्छ । यसमा मैनबत्तीको मैन कान नलीसम्म पुग्न सक्छ र कानको जालस्लाई हानी पुर्याउन सक्छ ।
यदि तपाईंलाई कानेगुजीको समस्या लगातार भइरहन्छ भने तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई आफ्नो कान पानीले सफा गर्न सुझाव दिन सक्लान् ।
मेडिकल साइन्समा यो तरिकालाई सिरिन्जिङ भनिन्छ । यो तरिकामार्फत् कानको फोहोर सफा गर्नका लागि एउटा सिरिन्जमार्फत् कानको नलीमा पानीको फोहोर हाल्ने गरिन्छ ।
कानेगुजीले समस्या दिएका बिरामीका लागि केही मेडिकलले क्लिनिक्स माइक्रोेसक्सनको बाटो पनि छान्ने गर्छन् ।
यो प्रक्रियामा विशेषज्ञ डाक्टरले कानभित्रको स्थिति हेर्नका लागि माइक्रोस्कोपको प्रयोग गर्छन् र एउटा सानो औजारमार्फत् त्यसलाई तान्ने गर्छन् । यो तरिका निकै सुरक्षित मानिन्छ र कानबाट नियमित रुपमा हुने श्रावको मामिलामा पनि यो असरदार मानिन्छ । बीबीसी
Previous articleठाकुर-महतो समूहमा गम्भीर असन्तुष्टि
Next articleयस्तो छ तीन दिनको मौसम, कहाँ कहाँ पर्दैछ पानी ?